यसरी भेट्नुस हराएको फोन | Abhash Adhikari
यसरी भेट्नुस हराएको फोन
4 weeks ago abhashadhikari Comments0Comment
रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदैहुनुहुन्छ । आफ्नो फोन चलाउन खोज्नु भयो , तर साथमा त छैन । तपाईंको फोन कता छ त ? आफुले राखेको ठाउँ बिर्सनु भयो अथवा चोरी पो भयो कि ? कतै छुटेको अथवा हराएको फोन कुन ठाउँमा छ भनेर तपाईं पनि आफैंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । के यसको बारेमा तपाईंलाई जानकारी छ ?
फोन हराएर त केहि भएन, तर त्यहाँ भएको डाटा र सम्पर्क ठेगानाहरुको दुरुपयोग पो हुने हुने हो कि भन्ने शंका पनि तपाईंको मनमा उब्जिन सक्छ । आज हराएको एन्ड्रोइड फोन लाई कसरी भेट्ने र नभेटिएको अवस्थामा त्यसमा रहेका डाटाहरुलाई कसरी अनिधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाउने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौं । आफ्नो हराएको फोन तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको मद्दतले भेट्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि तपाईंले आफ्नो गुगल एकाउन्टमा लग इन गरेर एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरमा जानुपर्ने हुन्छ । गुगल सर्चमा “एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर” टाइप गर्नुभयो भने तपाईंले यसको लिंक प्राप्त गर्नहुनेछ । प्राप्त लिंकमा क्लिक गरेर तपाईं एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ ।
एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर भित्र पस्नासाथ तपाईंले त्यहाँ हराएको फोनको साथमा गर्न मिल्ने ३ वटा कुराहरु देख्न सक्नुहुनेछ ।”प्ले साउण्ड “ भन्ने अप्सन थिच्नु भयो भने तपाईंको फोन साइलेन्ट मोडमा नै भए पनि ५ मिनेट सम्म बज्नेछ र त्यो फोनको आवाजको सहायताले तपाईंले आफ्नो फोन भेट्टाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी तपाईंसँग दोस्रो उपलब्ध रहेको अप्सन छ “लक”को । तपाईंको फोन जो मान्छे सँग छ, उसलाइ तपाइँले फोन लक गरेर संदेश छोड्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि तपाईंले एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरमा “लक” क्लिक गरेर आफ्नो फोन लक गर्दै लकस्क्रिनमा केहि सन्देस छोड्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ तपाईले आफ्नो अर्कै फोन नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ । यसरी फोन लक भैसकेपछि फोन भेट्ने व्यक्तिले तपाईंको सन्देश र तपाईंले दिनुभएको तपाईंको नया फोन नम्बर प्राप्त गरेर तपाईंलाई फोन फिर्ता गर्न सक्छ । यसैगरी एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरमै तपाईंले आफ्नो फोन कहाँ रहेको छ भनेर गुगल म्यापमै पनि फोनको लोकेसन देख्न सक्नुहुनेछ , जसले गर्दा तपाईंको फोन कहाँ हराएको रहेछ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अथवा कसैले भेटेर कुन ठाउँमा पुर्याएको रहेछ भनेर समेत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यदि कुनै पनि तरिकाले तपाईंको हराएको फोन भेटिदैन जस्तो लाग्छ तर तपाईंको फोनमा गोप्य अनि महत्वपुर्ण डाटाहरु छन् भने पनि तपाईं चिन्तित हुनु आवश्यक छैन । यसका लागि तपाईंलाई “इरेज“ भन्ने अप्सन दिएको छ डिभाइस म्यानेजरले । इरेज गरिसकेपछि तपाईंको फोनको डाटाहरु स्थायी रुपमै मेटिनेछ र इरेज गरेको समयमा तपाईंको फोन अफलाइन छ भने , अनलाइन आएको समयमा इरेजको कार्य सुचारु हुनेछ । तपाईंले ध्यान राख्न के जरुरी छ भने, यदि तपाईंको हराएको फोन भेट्ने व्यक्तिले भेट्ने बित्तिकै “फ्याक्ट्री रिसेट” गर्दियो भने तपाईंले माथि उल्लिखित कार्य गर्न सक्नु हुनेछैन । यसका साथै हराएको फोन अफ छ भने पनि तपाईंलाइ समस्या हुनेछ तर अफ हुनुभन्दा अगाडिसम्मको फोनको लोकेसन चाहीं तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यसका अतिरिक्त, आफ्नो फोनको आइएमइआइ नम्बर सहित तपाईंले प्रहरीकहाँ जानु भयो भने पनि तपाईंले आवश्यक सहायता पाउनुहुनेछ । Technology Updates	Post navigation
PREVIOUS कसरी कमाउने अनलाइनबाट